Nezvedu - Shenzhen M-Queen Electronics Co, Ltd.
Magnetic Simba Bhangi
Wireless Simba Bhangi
Kurumidza Kuchaja Simba Bhangi
Kambi Chiedza Power Bank
Zvipo Wireless Chaja
Wireless Chaja Mira
Bamboo & Wooden Wireless Chaja
Akatungamira Emitting Logo USB Dhiraivha
Bamboo & Wood USB Dhiraivha
PS5 Mutyairi Yekuchaja Chiteshi
JoyCon yeNintendo Shandura
M-Queen Electronics inonyanya kugadzira magetsi emagetsi, isina waya charger, USB flash drive uye zvishongedzo zvemitambo. Yakave ichiita mukugadzirwa kwemagetsi kwevatengi kweprimiyamu & nezvipo kwemakore gumi nemanomwe kubvira 2004. M-Queen anotora zvigadzirwa zvemberi & zvekugadzirisa uye inoshingairira manejimendi sisitimu kushandira vatengi vepasi rese nemutengo wakaderera uye hunhu hwakanaka. Kubatsira vatengi mukupa mhando yevatengi zvemagetsi masevhisi, M-Queen inopa inodhura-imwechete yekumisa mhinduro kubva pane pfungwa kusvika pakuendesa.
Mumagetsi emutengi, kushambadzira mafambiro zvese. Ndicho chikonzero, paM-Mambokadzi, isu tinotyairwa kuramba tichiteedzera kunyange akakwira mwero yemhando. Kuvimba nekuenderera mberi kwehunyanzvi uye hwakasimba hwekugadzira kugona, M-Mambokadzi dhizaini, inovandudza, inotsvaga, inogadzira uye inounganidza chero bhengi remagetsi, isina waya charger, USB flash drive uye mutambo wezvishandiso mapurojekiti, ayo anogadzira chaizvo izvo izvo vatengi vanofungidzira, inogadzira zvinoenderana nevatengi chaiwo zvinodiwa uye mu-imba inoomesera zviyero.
PaM-Mambokadzi, isu hatisi chete kupa yakakosha yekutengesa, asi isu tinoshanda kuburikidza nehunyanzvi ruzivo kuunza chimwe chinhu chakawedzera patafura - ziso rezvisingatarisirwe, simba rekurudziro. Ndiwo mashiripiti ane simba rekukwezva vatengi vepasirese uye kuzvisimudzira pachedu nguva dzose.
M-Queen parizvino yakagadzira musangano wemazuva ano wekugadzira unofukidza nharaunda inopfuura zviuru zvishanu zvemamirimita, inotora mamiriro ehunyanzvi hwekugadzira michina uye hunyanzvi hwekufananidza razvino magetsi bhangi, isina waya charger, USB flash drive uye mutambo wekushandisa masevhisi, nepo timu yedu ine tarenda iri kufara kuva shamwari yako, inopa iri nyore kushandisa online kotesheni sisitimu yekuona pane-nguva mhinduro kune vatengi vepasirese.
Usambononoka kuwana, batana naM-Mambokadzi kuti uwane chiitiko chiri nani. Isu tinoziva kuti unoshanda zvakaoma sei, ngatibatei nemusoro wekupa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, ipapo unogona kutarisa pane zvaunoita zvakanyanya.
Heano zvimwe zvikonzero nei uchisarudza isu:
1. Sarudzo dzakasiyana siyana dzezvigadzirwa zvemhando yepamusoro, zvinosanganisirwa asi zvisingagumiri kumabhangi emagetsi akasiyana siyana, charger isina waya, USB flash drive uye zvishongedzo zvemitambo.
2. M-Mambokadzi anonyatso shandisa akateedzana ehunhu hwemhando, kureva CE, FCC, RoHS, UL, ETL uye ISO nezvimwewo, zvinozivikanwawo neSGS neSedex 4 mbiru.
3. Mahara sampuli anowanikwa.
4. Zvigadzirwa zvinogara zvakaongororwa 100% zvisati zvaiswa.
5. Gamuchira diki huwandu hwekuraira, inokurumidza nguva yekuendesa kune yakadzikama odha.
6.Kuwana ruzivo rwekuita bhizinesi nevatengi vakuru muNorth America neEurope.
Sei Usinga Shande Pamwe NaM-Mambokadzi Zvemagetsi?